Dowladda Imaaraatka Carabta oo deeq gaarsiisay boqolaal carruur Soomaaliyeed oo agoon ah (Sawirro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
23rd April 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa maanta Boqolaal carruur agoon ah, oo da’doodu u dhaxayso 5 ilaa 14 sano jir, u qeybisay deeq isugu jirta Raashin iyo Timir.
Carruurta agoonta ah ee la gaarsiiyay deeqdaan ayaa ku xareysan Xarun lagu magaacaabo “Daryeel”, taas oo loogu tala galay in lagu xannaaneeyo Carruurta Agoonta ah iyo Daryeelka Ciyaalka darbi jiifka, iyadoo xaruntaasi ay ku taalo degmada Hodon ee gobolka Benaadir.
Deeqda la gaarsiiyay carruurtaan agoonta ah waxa ay ka koobnayd Lix Tan oo Timir ah iyo 400 oo kartoon oo Mac macaan iyo Raashin fudud isugu jira, taas oo dowlada Imaaraadka Carabta ay ugu tala gashay in lagu caawiyo carruurta agoonta ah ee u baahan kaalmada Bani’aadannimo.
Madaxa Mashaariicda Dowladda Imaaradka Carabta ee Soomaaliya, Cabdi Xamiid Sulaymaan, oo ka hadlay goobta lagu qeybinayay deeqdaan ayaa sheegay in deeqdaani ay qeyb ka tahay Kaalmada joogtada ah ee dowladda Imaaraadku ay siineyso Shacabka Soomaaliyeed.
Cabdi Xamiid Sulaymaan waxa uu intaas ku daray in ay sii wadi doonaan gurmadka iyo taageerada dhan walba leh oo ay siinayaan shacabka Soomaliyeed.
“Dowlada Imaaraadka Carabta waxa ka go’an in ay sii laba jibaarto kaalmada joogtada ah ee ay siineyso Walaalaheeda Soomaaliyeed” ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay Madaxa Mashariicda Dowlada Imaaradka Carabta ee Soomaaliya Cabdi Xamiid Sulaymaan.
Xaliimo Maxamed Macalin oo ah maamulaha Xarunta Xanaannada Carruurta agoonta ee “Daryeel” ee maanta la gaarsiiyay deeqdaan ayaa uga mahad celisay Dowlada Imaaraadka Carabta kaalmada ay siisay caruurta agoonta ah, waxaana ay tilmaamtay in kaalmadaan ay ku so beegantay xilli ay carruurtu ay baahi weyn u qabeen.
Sidoo kale, Qaar ka mid ah Carruurtii la gaarsiiyay deeqdaan ayaa dhankooda ka mahadceliyay gurmadka ay Dowlada Imaaraadka Carabtu u fidisay,, iyaga oo sheegay inay aad ugu faraxsanyihiin kaalmada maanta loo qaybiyay.
Deeqdani ma aha tii ugu horreysay oo ay Dowladda Imaaraadku u fidiso Carruurta Agoonta Soomaaliyeed, ee waxaa jira in taageero kala duwan oo soo socotay muddooyinkii la soo dhaafay, taas oo lagaarsiinayay kumanaan carruur agoon ah oo ku xareysan xarumo kala duwan oo ku yaalla Magaalada Muqdisho.
Dowladda Imaaraadka ayaa ka fulineysa Caasimadda muqdisho iyo gobollada dalka qaarkood, mashaariic kala duwan oo isugu jiraa kuwa beni’aadannimo iyo kuwa horumarineed intaba.
Ciidamada Soomaaliya iyo Amisom la wareegay deegaano ka tirsan Hiiraan & Bakool